आज विजोर नम्बरका सवारी मात्र चल्न पाउने : कस्ता व्यक्तिलाई लागु हुदैन यो नियम ? थाहा पाउनुहोस – Fewa Times
आज विजोर नम्बरका सवारी मात्र चल्न पाउने : कस्ता व्यक्तिलाई लागु हुदैन यो नियम ? थाहा पाउनुहोस
प्रकाशित मिति: December 1, 2019 9:08 am
काठमाडौं – तपाईको गाडी नम्बर जोर की विजोर ? यदी जोर छ भने आइतबार गाडी नचलाउनुहोस् । केही पुराना या कमजोर गाडी छन् भने पनि प्रयोग नगर्नुहोस् । किनकी, आइतबारदेखि दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रगियोगिता (साग) हुने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।